Ukukhohliswa ngokomzwelo kulezi zithandani | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 21/07/2021 22:02 | I-Psychology
Ukuhlukumeza ngokomzwelo ngaphakathi kwezithandani kuyinto ejwayelekile futhi ejwayelekile kunalokho abantu abangacabanga. Imayelana nokukhohlisa lo mbhangqwana ngokwengqondo ukuze enze njengoba umnyama efuna yena uqobo.
Ngaleso senzo sokukhohliswa noma ukukhwabanisa kuvame ukuba nomuntu ongenakho ukuphepha nokuzethemba okusobala impela. Ukuhlukumeza ngokomzwelo phakathi kwezithandani akunakuvunyelwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo futhi kubalulekile ukuyiqeda.
1 Ukuhlukumeza ngokomzwelo kulezi zithandani
2 Wazi kanjani ukuthi ukuhlukumezeka okungokomzwelo kwenzeka kulaba abashadile
3 Ungabhekana kanjani nokuhlukunyezwa okungokomzwelo okuvela kumlingani wakho
Njengoba sesichazile ngenhla, ukuchukuluza ngokomzwelo uhlobo lokukhohliswa komuntu othile komunye. Ngokukhohlisa okunjalo, i-blackmailer ikwazi ukuqeda lowo muntu futhi imenze enze ngendlela afuna ngayo. Lokhu kuholela ekutheni ubudlelwano balezi zithandani bube yingozi nomonakalo ongokomzwelo obhekene nawo kwelinye lamaqembu.
Ubudlelwano obunempilo kufanele bususelwe kumagugu abaluleke njengothando, inhlonipho noma ukuxhumana. Alukho uhlobo lwe-blackmail noma usongo ezingeni lomzwelo. Esimweni lapho ukuhlukumezeka ngokomzwelo kwenzeka njalo, isihloko kumele sibuqede ubudlelwano futhi sisheshe sinciphise ukulahlekelwa kwabo.
Wazi kanjani ukuthi ukuhlukumezeka okungokomzwelo kwenzeka kulaba abashadile
Kwesinye isikhathi akulula ukuthola ukugconwa ngokomzwelo phakathi kwezithandani, ngoba umuntu okhohlisayo akakwazi ngokugcwele ukuthi uzama ukuhlukumeza ngokomzwelo othandekayo. Nazi ezinye zezimpawu ezicace bha zokuhlukumeza okungokomzwelo:
Umkhohlisi wenza umlingani wakhe abe necala ngezenzo zakhe ngakho-ke uzizwa unecala futhi unesikhathi esibi impela.
Udlala isisulu ngakho konke ikakhulukazi ukuvimbela isihloko ukuthi singashiyi.
Imvamisa wenza zonke izinhlobo zezethembiso angazigcini kamuva. Lezi zithembiso zenzelwe injongo noma inhloso yokugcina othandekayo wakho eceleni kwakho.
Ukusetshenziswa kwezinsongo kuyaqhubeka ebudlelwaneni ukudala ukwesaba okuthile kothandekayo, ngaphezu kokunciphisa inkululeko yomuntu oshiwo.
Esinye sezimpawu ezicace bha zokuhlukumeza okungokomzwelo ukuthula. Umuntu omnyama uthatha isinqumo sokuthula akhombise ulaka lwakhe futhi anqabe ukukhuluma nomlingani wakhe. Luhlobo lokuhlukumeza ngokwengqondo olucekela phansi kancane kancane lowo owenziwa kuye.
Ungabhekana kanjani nokuhlukunyezwa okungokomzwelo okuvela kumlingani wakho
Okokuqala, qaphela ukuthi isimo sokugconwa ngokomzwelo siyenzeka ebudlelwaneni. Ukusuka lapha, kungabaluleka ukuya kuchwepheshe owaziyo ukuthi angamsiza kanjani umuntu onobuthi.
Akunakuvunyelwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuthi ukulawula kusungulwe kuzithandani njengokujwayelekile. Ngamunye kufanele akhululeke futhi abe nendawo yakhe siqu ebudlelwaneni.
Izinsongo kufanele ziyeke ukuba khona ngaphakathi kwalezi zithandani. Kunochungechunge lwamagugu okufanele abekhona ngaso sonke isikhathi, njengokuhlonipha noma ukuxhumana.
Umuntu okhohlisayo kufanele afune ukuguquka futhi abone ukuthi abakwazi ukusebenzisa ubuqili obungokomzwelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Ukuhlukumeza ngokomzwelo kulezi zithandani